Yenza kungasebenzi amadivayisi ngeskripthi ku-Windows > UVielhuber David
Yenza kungasebenzi amadivayisi ngeskripthi ku-Windows10
Ukuze wonge ugesi noma wehlise umbono wakho wokuqapha, kungakuhle ukuthi unqamule ngokuphelele amadivayisi angasetshenziswanga kwikhompyutha yakho. Amadivayisi afana namabhokisi wemisindo noma ama-webcam angavalwa / enziwa asebenze ngendlela yakudala ngomphathi wedivayisi. Yonke le nto iyasebenza nangeskripthi. Indlela ejwayelekile yokwenza lokhu yayijwayele ukuba yi- devcon . Windows 10 manje inikeza indlela elula yokwenza lokhu ngePowerShell .
Okokuqala unquma igama noma i-ID yehadiwe ngomphathi wedivayisi (chofoza kwesokudla kudivayisi efanele> Imininingwane> Incazelo yedivayisi / ama-ID wehadiwe). Ngenye indlela, futhi ungasebenzisa umyalo wePowerShell Get-PnpDevice -PresentOnly . Manje udala iskripthi se-PowerShell esilandelayo:
Isikripthi sikhombisa ngokuzenzakalela ibhokisi le- UAC ngoba lidinga amalungelo okuphatha futhi manje selingabizwa ngale ndlela elandelayo:
I-XXX imele igama noma i-ID yehadiwe, i-YYY yamanani anika amandla noma akhubaze (uhlobo lungabuye lushiywe, bese isimo samanje sikhishwe esimweni ngasinye). Ukushayela yonke into kalula ngesixhumanisi, mane uyidale ngale ndlela elandelayo:
I-Autostart ngokuhlela umsebenzi (ngezinketho "Ukusebenza ngaphandle kokulawulwa kwe-akhawunti yomsebenzisi" kanye "namalungelo aphezulu") noma ukulawula ngama-hotkey ekhibhodi kungenzeka kalula ngethuluzi elifana nelincane , isibonelo.